Archive du 20181004
Dinam-pitondrantenan’ny kandida Tsy nanasonia Ravalomanana sy Rajoelina
Sady tsy tonga no tsy nandefa solontena teny amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny i Marc Ravalomanana nandritra ilay fihaonana nentina nanasonia ny dina ara-pitondrantenan’ny kandida sy ny etika tokony hananany mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana.
Korontana eto amin’ny firenena Tompon’antoka ny CFM, HCC, CENI
Tsy mahatafavoaka baolina ny Filankevitry ny fampihavanana Malagasy na ny CFM tarihin’Atoa Maka Alphonse,
Radanoara Julien “Tsy tokony hifidy ny any ambanivolo”
Mbola mijoro amin`ny heviny Radanoara Julien, mpampianatra fifandraisana iraisam-pirenena amin`izao ankatoky ny fifidianana izao fa tsy mety amintsika ny olona any ambanivohitra mifidy satria tsy feno ny vaovao azony. Efa tamin`ny taona 2013,
Dinam-pitondrantena Kandida 6 amin’ny 36 ihany no nanasonia
Kandida 6 monja tamin’ny 36 ihany omaly 3 oktobra no nanasonia ilay dina ara-pitondrantena ho an’ny kandida filoha novolavolain’ny Filankevitry ny fampihavanana Malagasy sy ny vovonana miaraka aminy, toy ny CENI.
Firenena Alemana “Aleo ny vahoaka haneho ny heviny amin’ny fifidianana”
Mandrisika hatrany ny hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara amin’ity taona ity i Alemaina, hoy ny masoivohony Atoa Harald Gehrig omaly teny amin’ny Villa Berlin nandritra ny lanonana nahatsiarovana ny fitambaran’i Alemaina taorian’ny nirodanan’ny rindrin’i Berlin.
Dinam-pifanarahana ho lalàna « Sarotra ny hanatanteraka izany”, hoy i Imbiky Herilaza
Iaraha-mahafantatra fa nanomana karazana « dinam-pifanarahana” ny komitin`ny fampihavanam-pirenena (CFM).
Rivo Rakotovao “Mila ampanjakaina ny lalàna !”
Ny fahefana nomena ahy dia natao hampanjakana ny lalàna, hoy ny filoham-panjakana, Rivo Rakotovao, raha nidinidinika tamin’ny solontenan’ireo mpanao gazety tonga teny amin’ny lapan’Ambohitsirohitra omaly.
Fampielezan-kevitra Tsy mitovy lenta ny kandidà rehetra
Efa mirona amin`ny fampielezan-kevitra isika na tsy ao anatiny tanteraka amin`izao. Amin`ny ankapobeny, ny propagandy dia natao ho fampahafantarana ny vina sy ny tetikasa amin`ny vahoaka mba ahafahan`ny kandidà iray handresy amin`ny fifidianana.
Ambasadaoro Amerikanina Hotendrena tsy ho ela
Nihaona tamin’ny praiminisitra Ntsay Christian ny mpiandraiki-draharaha vonjimaika eo anivon’ny masoivoho Amerikanina, Atoa John Groarke, omaly tetsy amin`ny lapan`i Mahazoarivo.
Mpiray tanindrazana miaro tontolo iainana (M.C.P.E) Hanatona an’i Lalao Ravalomanana
Niforona ny 16 oktobra 2014 ny fanetsiketsehana ny mpiray tanindrazana handala ny fahadiovana sy hitandro ny tontolo iainana na “Mouvement des citoyens patriotes écologistes” (M.C.P.E).
Fandorana ny alan’i Fanalamanga Tena famotehana ny harem-pirenena tsotra izao
Taitra tamin’ny torimasony ny zanak’i Mangoro noho ny fahamaizana mitranga ao anaty alan’i Fanalamanga ankehitriny ka namoaka fanambarana.
Basket – Tompondaka nasionaly U 18 2018 Ekipa 34 lahy sy vavy no handrasana any Tsiroanomandidy
Ekipa lehilahy miisa 20 avy amin’ny ligim-paritry ny basikety 14 sy ekipa vehivavy 14 avy amin’ny ligim-paritra 8 no handray anjara amin’ny fifaninanam-pirenena fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018 eo amin’ny taranja basikety baolina sokajy U 18.
Asief Rugby 2018 Ny ekipan’ny « Fonction Publique » no nahery
Nifarana ny talata 2 oktobra teo ny fifaninanana Rugby Asief notontosaina any amin’ny kianja Crjs Toamasina. Ekipa 6 avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamana, Prm, Primature, Fop,
Aiza ireo “Ratsy holavina” ?
Efa nampoizina ihany ny zava-nitranga tetsy amin’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny omaly.
Vondron’ny koperativa Fasan’ny Karana Mampitandrina ny fanjakana
Raha tsy hainareo fanjakana no manao fifampiraharahana ny mikasika ny tany kely etsy amin’ny Fasan’ny karana io, dia tsy ampahafirin’ny tany nalain’ny Filatex io, ka omeo alalana izahay hanao izany any aminy, hoy Rafidinjatovo, mpitarika ny vondron’ireo koperativa miasa etsy amin’ny Toby fiantsonan’ny fiara eny amin’ny Fasan’ny Karana.
Filankevitra ara-pitsipi-pifehezana momba ny tetibola sy ny vola Mahavoasazy ireo fahadisoana ara-pitantanana
Omaly alarobia 3 oktobra no nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ny andraikitry ny filankevitra ara-pitsipi-pifehezana momba ny tetibola sy ny vola (CDBF).
Mamiratra hatrany i Shyn Hifaninana an-kira any Etazonia
Handray anjara amin'ny "All African Magazine Music Award" izay atao any Etazonia ilay mpanakanto Malagasy Shyn ny 5-7 oktobra 2018 ho avy izao.
Miainga etsy Ankasina ny fikarakarana ireo héroïne hamidy eto an-drenivohitra.
Hihazo ny faritra atsimon’ny nosy iny, ho any Toliara ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana anio,
Hisy ny fivorian’ireo kandida ho filoham-pirenena mankato ny fitsanganan’ilay antsoina hoe fanjakana gasy anio, raha ny heno tamin’ny tsiliam-baovao iray.
Famitaham-bahoaka goavana Hohavaozina indray ny “Permis de conduire Biométrique”
Nampahafantarina tetsy Ambohidahy omaly fa mbola hohavaozina indray ireo taratasy fahazoan-dalana hamily fiara sy fanamarinana ny fisian’ny fiara biometrika (permis de conduire biométrique et carte grise) izay efa nilaharana volana maro nanomboka nangiran-dratsy tamin’ny fotoan’androny.
Mpivarotra efa nomen’ny CUA toerana Mihorohoro ny hoesorin’ny fanjakana
Faly ny mpivarotra amoron-dalana eo akaikin’ny Espalanade Analakely fa nomen’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana toerana maimpaimpoana ahafahany mivarotra, nefa tsy manelingelina ny fifamoivoizana no manome endrika ny tanàna.
Fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina Manahy ny hisian’ny kolikoly ny mpiara-miombon’antoka
Mitotaly 639 tapitrisa dolara ny vola atontona amin’ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina ka ny 411 tapitrisa dolara dia vola nampindramina amin’ny Japoney ary aloha ao anatin’ny 40 taona fa ny ambiny kosa dia ny fanjakana no handray an-tanana azy.
Fanarahana ny teknolojia vaovao Efa liana ny ankamaroan’ny orinasa Malagasy
An-jatony ireo orinasa eto Madagasikara no tonga tetsy amin’ny hotely Le Louvre Antaninarenina omaly alarobia 3 oktobra nanatrika ny fampahafantarana sy ny fampiofanana momba ny teknolojia malaza sy vaovao amin’izao fotoana izao.